Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ)
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) ကဘာလဲ။
ကာလဝမ်းရောဂါဟာ Vibrio cholera ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ကာလဝမ်းရောဂါက အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ရောဂါကို လွယ်ကူစွာ ကာကွယ်လို့လည်းရသလို ကုသလို့လည်းရတယ်။
ကာလဝမ်းရောဂါရဲ့ လက္ခဏာအများစုက သာမန်ဝမ်းလျှောတာနဲ့တူပြီး တခြားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းရောဂါတွေနဲ့ ခွဲရခက်တတ်ပါတယ်။
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါက ဖြစ်ခဲပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေကို လျှော့ချပြီး ရောဂါကာကွယ်နိုင်တယ်။ ထပ်မံသိလိုသော အချက်များအတွက် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ကာလဝမ်းရောဂါရဲ့ အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာများမှာ-
ဝမ်းလျှောခြင်း။ ။ ကာလဝမ်းကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းအရောင်က ဖျော့ပြီး နို့ရောင်လို ခပ်နောက်နောက်ဖြစ်တတ်တယ်။ ဆန်ဆေးရည်လိုမျိုးဖြစ်တယ်။
ပျို့အန်ခြင်း ။ ။ ကာလဝမ်းရောဂါရဲ့ အစောဆုံးအဆင့်မှာ အဖြစ်များတယ်။ အန်တာက နာရီပေါင်းများစွာ ကြာနိုင်တယ်။
ရေဓါတ်ခန်းခြောက်ခြင်း။ ။ ကာလဝမ်းရောဂါ လက္ခဏာပြပြီး နာရီပိုင်းအတွင်းမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွင်းရှိဓါတ်များ ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်း။ ။ ဒီအခြေအနေကြောင့် ကြွက်တက်ခြင်းနဲ့ ရှော့ခ်ရခြင်းလို ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ မပါတဲ့အချက်တွေလည်း ရှိနေနိုင်တယ်။ ရောဂါလက္ခဏာအကြောင်း သေချာသိလိုလျှင်ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးပါ။
တကယ်လို့ သင်ဟာ အပေါ်ကရောဂါလက္ခဏာ ခံစားနေရရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ မေးမြန်းစရာရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓါက တုံ့ပြန်မှုမတူတတ်ကြပါဘူး။ သင့်အခြေအနေကို ဆရာဝန်နဲ့ဆွေးနွေးတာက အကောင်းဆုံးပါ။
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ကာလဝမ်းရောဂါဟာ Vibrio cholera ရောဂါပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအချက်ကတော့ CTX လို့ခေါ်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒါကို အူသိမ်တွေမှာ ဘက်တီးရီးယားပိုးက ထုတ်ပေးတယ်။
CTX က အူသိမ်နံရံတွေမှာ ကပ်တွယ်ပြီး ဆိုဒီယမ်နဲ့ ကလိုရိုက်တွေရဲ့ ပုံမှန်စီးဆင်းမှုကို တားမြစ်တယ်။ ဒါက ကိုယ်တွင်းမှာ ရေတွေအများအပြားစွန့်ထုတ်စေပြီး ဝမ်းလျှောစေတဲ့အပြင် အရည်နဲ့ ဆားဓါတ်တွေဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေတယ်။
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကာလဝမ်းရောဂါကို ဖြစ်စေတဲ့အချက်တွေ များစွာရှိတယ်။ ဒါတွေကတော့..
မသန့်ရှင်းသော ရေဆိုးစွန့်ထုတ်တဲ့ အခြေအနေ – ကာလဝမ်းရောဂါဟာ မသန့်ရှင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖြစ်များတယ်။ ရေပေးဝေမှုက မလုံခြုံတာကြောင့်လည်း ရောဂါကို ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်တယ်။
အစာအိမ်အတွင်း အက်ဆစ်ဓါတ်နည်းနေခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်း။ ကာလဝမ်းရောဂါပိုးဟာ အစာခြေဖျက်ပေးတဲ့ အက်ဆစ်ထဲမှာ အသက်မရှင်နိုင်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် အစာအိမ်ရဲ့ အက်ဆစ်တွေက ရောဂါမဖြစ်စေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးအကာကွယ် ဖြစ်ပါတယ်။
အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများမှ ကူးစက်ခြင်း။ သင်ဟာ ဝမ်းရောဂါဖြစ်တဲ့လူနဲ့ အတူတူနေရင် ရောဂါကူးစက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းများပါတယ်။
အိုသွေးအမျိုးအစား။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အဖြေကို မသိရပေမယ့် အိုသွေးသမားတွေက တခြားသွေးအမျိုးအစားတွေထက် ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ ၂ဆပိုများပါတယ်။
ကမာကောင်တွေကို အစိမ်းစားခြင်း သို့မဟုတ် မကျက်တကျက်စားခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာ ကာလဝမ်းရောဂါကပ်ဘေးသင့်လေ့မရှိသော်လည်။ ဆိပ်ကမ်းနားရှိရေထဲက ကမာတွေကို စားခြင်းက ရောဂါပိုးဝင်ရောက်နိုင်ခြေများပါတယ်။
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Crystal VC® လို့ခေါ်တဲ့ စမ်းသပ်တံကိုသုံးပြီး အမြန်စစ်ဆေးခြင်း
Cholera (ကာလဝမ်းရောဂါ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရေဓါတ်ပြန်ဖြည့်ခြင်း။ ဓါတ်ဆားရည်ဖြင့် ကိုယ်ခန္ဓါကဆုံးရှုံးသွားသော ရေနှင့်ဆားဓါတ်ကို ပြန်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
အကြောဆေးသွင်းခြင်း။ ကာလဝမ်းရောဂါကပ် ဆိုက်လာလျှင် လူတော်တော်များများကို ဓါတ်ဆားရည်ဖြင့် ကုသနိုင်သော်လည်း ရေဓါတ်အရမ်းလိုအပ်နေသောလူများအတွက်မူ သွေးကြောမှတစ်ဆင့် အရည်ဓါတ် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းနိုင်ပါတယ်
ပိုးသတ်သေး။ doxycycline (Monodox, Oracea, Vibramycin) or azithromycin (Zithromax, Zmax) များကို တစ်ခါတိုက်ရုံနဲ့ လုံလောက်နိုင်ပါတယ်။
ဇင့်ဓါတ်ပြန်လည်ဖြည့်တင်းခြင်း။ လေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေအရ ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်တဲ့ကလေးတွေမှာ ဇင့်ဓါတ်လျော့နည်းပြီး ဝမ်းလျှောတာအချိန်တိုသွားစေပါတယ်။
ကာလာဝမ်းရောဂါမဖြစ်စေဖို့ ထိရောက်တဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးက ဘာတွေလဲ။
အောက်ပါနေထိုင်မှုပုံစံတွေနဲ့ အိမ်တွင်းကုထုံးတွေက သင့်ကို ကာလဝမ်းရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ ရေနဲ့ မကြာခဏဆေးခြင်း။ အထူသဖြင့် အစားမစားခင်နှင့် အိမ်သာသွားပြီးချိန်
လုံလောက်စွာချက်ထားတဲ့ ပူနွေးနေသော အစားအသောက်များကိုစားခြင်း။ ဖြစ်နိုင်လျှင် လမ်းဘေးစာများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း
ဆူရှီနှင့် ကျက်အောင်မချက်ထားသော သို့မဟုတ် ချက်ပြုတ်ထားခြင်းမရှိတဲ့ ငါးနဲ့ ပင်လယ်စာတွေကို မစားခြင်း
ကိုယ်တိုင်အခွံခွာစားနိုင်တဲ့ အသီး ( ငှက်ပျောသီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ထောပတ်သီး)တို့ကို စားခြင်း။ အသုတ်များနဲ့ အခွံမပါတဲ့ စပျစ်သီးနှင့် ဘယ်ရီသီးတွေကို မစားခြင်း
နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့် ရေခဲမုန့်တို့ကို သတိပြုပါ။ ဒါတွေကို တစ်ခါတစ်လေ နို့အစိမ်း သို့မဟုတ် ပိုးမသတ်ရသေးတဲ့နို့နဲ့ လုပ်လေ့ရှိတယ်။
သင့်အနေနဲ့ မေးမြန်းလိုတာများရှိလျှင် ဆရာဝန်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအဖြေများ ရယူနိုင်ပါတယ်။
Reference: Cholera. http://www.cdc.gov/cholera/diagnosis.html. Accessed September 26, 2016.
Cholera. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/cholera/basics/prevention/con-20031469. Accessed September 26, 2016.
Cholera. http://www.webmd.com/a-to-z-guides/cholera-faq#1. Accessed September 26, 2016.